Ogaden News Agency (ONA) – Waxaan doonaynaa inaan ku galadeysano kuwii Dhulka lagu dhex guumaystay oonu Madax ka dhigno! By: Xaaji M/Rashiid.
Waxaan doonaynaa inaan ku galadeysano kuwii Dhulka lagu dhex guumaystay oonu Madax ka dhigno! By: Xaaji M/Rashiid.
Posted by Daljir	/ March 31, 2016
Suuratu Alqasas,Aayada 5aad-وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّة
Waxaan doonaynaa inaan ku galadeysano kuwii dhulka lagu dhex guumaystay oonu Madax ka dhigno.
Bismillaah, Alxamdu Lillaah- Ilaahay waxuu abuuray Makhluuqaad fara badan oo qaarkood leeyihiin awood iyo miisaan aan la qiyaasi karin, hadaan soo qaadano Cirka bal si wanaagsan u fiiri waxa ka dhex muuqda, sida Qorraxda iyo Dayaxa, bal sidoo kale aragti caafimaad qabta ku eeg Dhulka iyo waxa dul saaran sida Badaha iyo Buuraha. Waxaa kale oo jira makhluuqaad naflay ah oo iyaga qudhoodu cajiib ah. Hadaan soo qaato qaarkood bal si iimaan ku jiro u eeg Maroodiga, Libaaxa, Geela iyo Lo’da. Runtii waxaas oo Makhluuqaad ah oo bani,aadamka kawada xoog badan waxaan usoo qaatay inaan dadaka dareensiiyo in waxaasi yihiin kuwo aan caqli iyo Cibaado toona loogu deeqin, balse waxaa loo abuuray oo kaliya inay u adeegaan Bani,aadamka ileen waxaa lasiiyay karaamo, caqli, sharaf iyo cibaado intabee. Hadaba dadkii Rabi sidaa u qiimeeyay ee uu ka sare mariyay dhamaan Makhluuqaadka aan soo xusay ee loogu talo galay inay dhulka islaaxiyaan xagay wax mariyeen, xagayse badankood ka bus kiciyeen?
Hadaan hordhaca qoraalkan intaa ku dhaafo, ilaahay SWTC kor iyo hoosba wuu kala socdaa waxa ka dhacaya dhulka dhexdiisa ee Gabood falka ah. Rabi waxuu jecelyahay waa ixsaanka, cadaalada iyo isu naxariisashada, meesha uu necebyahay dulmiga, cadaalad xumada, iyo in la is guumaysto. Asal ahaan waxaa dhulkan loogu talo galay dadka Akhyaarta ah iyo inay ku camiraan samafal, cadaalad iyo Cibaado Eebe. Hadayse ka seexdaan shaqadoodii oy dadaalkii ka tagaan sow xaaladu ma noqonayso ninkii seexday ayuu Saciisu Dibi dhalay!
Aan hoos usii quuso maqaalka ee waxaad ogaataan inaan marna lagu waarayn guumaysi iyo is adoosi maxaa yeelay ruuxna wajiga kagama suntana inuu waliigii adoosi, Gaajo iyo qax ku jiri doono, cid kastana fursada sharafta iyo karaamadu way soo maraysaa ee ma ka faa’iidaystay mise wuu dayacay? Haduu Rabi doono inuu umad la guumaysto kasaaro guumaysiga waxuu marka hore keena Jiil Geesi ah oo daacad ah isla markaana huraya naf iyo maal iskuna tashanaya, Niyadoodana ay dhab katahay inay adoonsiga ka baxaan. Waa intaa kaliya shardiga horyaala umadaas.
Aayada Qur’aanka ah ee aynu maanta darsayno waxay la jaan,qaadaysaa Jiikaas wax walba hurayaalka ah ee leh tilmaamahaas, waxayna ishaareysaa in Maamulkii adoosiga ku dhisnaa Talada iyo madaxnimada lagala wareegi doono. Cida kala wareegaysa waa Umada laga helo shuruudaha aan soo xusay waana Albaab furan inta Dunidu dhisantahay oo majirto qolo gaar isaga leh Aayadan qur’aaka ah, inkasta oy milicsanayso qowmiyado horay loo guumaystay hadana waa mid guud ahaaaneed.
Suuraru Alqasas, Aayada 5aad-وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً Dhanka kale waxaa Aayada ka dhex muuqda bishaaraad mar hadii Ogadenya laga helay Jamaacooyin is wada balansaday oo ilaahay talo saartay iskuna tashadayTaarged,kooduna u cadyahay.
Bahwaynta S.Ogadenya oo uu Guumaystuhu kula kacay falal gurracan oo taariikhi ah ayaan waligeed Madaxa hoos u dhigin iyagoo Gacmaha ka gubay Guumaystaha oo Dhuxul ku noqday. Sida waqtigan muuqata waxaa halgamaaga meel uu joogaba hortaala fursad Dahabi ah taasoo ah mid aan horay usoo marin. Hadaan Carrabka ku dhuftana waa markii koowaad Taariikhda oo halganka Ogadenya kasocda Usha u qabto Qowmiyadaha ku hoos dulman waxa loogu yeedho Itoobiya. Si kastaba ha ahaatee Aayadan waxaa laga dhadhansanayaa inuu dhamaaday waqtigii Taliska Guumaystaha Geeska Afrika.
Isku soo duuboo kud iyo kaar ha dilee Duqdii xumayd ee Itoobiya loogu yeedhi jiray waxay biqlaysaba maanta waxay u jilib xidhantahay in la Gawraco waxaana Ku foorara Mindiyo fara badan Faaska ugu wayna waxaa midigaystay Ururka ONLF, balse aan eegno markii la qeybsado waaxyaheeda waxa goobta kusoo hadha!
Guul iyo Gobanimo iyo Allaahu Akbar!